Maternity rubatsiro rwevanaamai muSpain | Ehupfumi Zvemari
Kana nguva yasvika yeiyo mukadzi kubata pamuviri Kukahadzika kwakawanda kunomuka, kunyanya munzvimbo yavo yebasa. Mibvunzo ine mhinduro uye mune ino chinyorwa tichafumura.
Semuenzaniso, kuziva iyo maternity mabhenefiti apa muchifunga mai vacho. Ichokwadi kuti mari yehupfumi inobatanidzwa mukurera mwana yakakura kwazvo uye chero kusundirwa kubva kuHurumende ishoma.
Pane zvirongwa zvekutsigira izvo zvinoitirwa kubatsira nemasevhisi anodiwa nemwana mukukura kwawo uyezve kubatsira amai mukuita kana vari kushanda panguva yekuva nepamuviri.
MuSpain kune zvirongwa zvinopa rubatsiro rwakasiyana uye izvo zvechokwadi zvinopihwa mahara, izvi, kubatsira kusimudzira iyo Spain yekuzvarwa chiyero iyo yanga ichiderera mumakore achangopfuura, nyika inopa rubatsiro rwemari yakawanda uye kubviswa kwekuzvarwa kwemwana.
1 Hurumende maternity rubatsiro rwemwanakomana wedu
2 Rubatsiro rweMatnity rwekuzvarwa kana kutorwa.
3 Batsira mukuchengeta vana nekuda kwekurerwa kana kuchengetwa zvachose.
4 Batsira mhuri huru.
5 Kubviswa kwemutero wemunhu mari.
6 Maternity kubatsirwa.
7 Zororo rekuberekwa.
9 Imarii inobhadharwa
Hurumende maternity rubatsiro rwemwanakomana wedu
Mune ino kesi, mumwe wevabereki vemwana anogona kunyorera rubatsiro, ane mubhadharo mumwe chete unoverengerwa uchifunga nezvekupindirana kwemubhadharo wevabereki mugore razvino (parizvino iwo mubhadharo mushoma muSpain ndeye 735.90 euros) uye huwandu hwevana vako kana vekurerwa zvichienderana nenyaya yacho.
Kana vakadaro vana vaviri mubhadharo wekushandira wakaderera unowedzerwa neana, kana vaine vana vatatu mubairo wepasi unowedzerwa nevasere uye kana uine vana kana kupfuura vana mubairo wepasi unowedzerwa negumi nevaviri.
Muchiitiko chekuti mumwe wevana akatambura ne kuremara kwakaenzana kana kudarika 33%, zvakapetwa kairi kunofanirwa kuverengerwa.
Rubatsiro rwambotaurwa rwunoenderanawo ne kuberekwa kwemwana kana kubatsirwa mumhuri hombe, vanaamai vakaremara uye vabereki vari vega, mudyandigere nherera, yakakosha mari yekuzvara yekubereka, pakati pevamwe.
Rubatsiro rweMatnity rwekuzvarwa kana kutorwa.
Kana mhuri dzisingapfuure mimwe miganho yemari uye mimwe yemamiriro ezvinhu anotevera anosangana, Social Security inopa rubatsiro rwe1.000 euros mubhadharo mumwe chete:
Vana vanozvarwa kana vakarerwa mumhuri yemubereki mumwe chete: ndiko kuti, iyo mhuri iyo inongogadzirwa nemubereki mumwe chete uye ndiye uyo anogara naye mwana.
Vana vanozvarwa kana vakarerwa mumhuri hombe: ndiko kuti, idzo mhuri dzine vana vakawandisa kana vanowana mamiriro aya nekufamba kwenguva.
Vana vanozvarwa kana kugamuchirwa mumhuri umo amai vanotambura nehurema hwakaenzana kana kupfuura 65%: izvi, sekureba sekuzvarwa kana kugamuchirwa kwemwana kwakaitika mukati medunhu reSpain.
Icho chakataurwa pamusoro apa chiri kusunungurwa kubva kuRIPF (Yemunhu Mari Yemutero) uye iri inowirirana nezvibereko zvemwana kana zvekubvumidzwa mumhuri hombe, vanaamai vakaremara uye vabereki vari vega, mudyandigere nherera, yakakosha mari yekuzvara yekubereka, pakati pevamwe.
Batsira mukuchengeta vana nekuda kwekurerwa kana kuchengetwa zvachose.
Rubatsiro urwu rwunopihwa kumwana wega wega kana mwana ari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa, kana kukundikana izvo, kuvana vane hurema uye vari pasi kana pasi peanopfuura makore gumi nemasere mubhadharo yakaenzana kana kupfuura 18%, iri mubhadharo yemubatsiri, pamwe neiyo yakachengetedzwa nechinangwa chekutora nekuchengetwa zvachose kwevabereki.
Mune aya mamiriro maviri, zvakasiyana zvinodiwa zvinofanirwa kudikanwa kune yega yega.
Kuti uwane rubatsiro rwemari nevana vari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa, zvakafanira kuti usapfuure muganho wemari.
Kugamuchira rubatsiro nevana vakaremara, zvichave zvakakodzera kuti munhu anotarisira mwana agone kuona kuti hurema i33%.
Batsira mhuri huru.
Kuti mhuri ive inobatsirwa nerudzi urwu rwekubatsira, inofanira kunge iine iyo zita hombe remhuri inosungirwa, ichitsanangura kana iri yechizhinji chikamu, kubva pavatatu kusvika vana vana kana veboka rakakosha, kubva kuvashanu vana zvichienda mberi.
Kune irwo rubatsiro pane imwe mhando yekubvisa iyo inogona kuiswa musitatimendi yemari kana, kugamuchira zana euros pamwedzi sekubhadharira mberi.
Kubviswa uku kunotevera zvichienderana nemhuri:
Kubviswa kwe1200 euros, yakanangana nemhuri zhinji dzakakura.
1200 euros yekubvisa, yakanangana nemhuri dzine vana vakaremara.
2400 euros yekubvisa, yakanangana nemhuri dzine chakakosha chikamu.
Uye kwete zvirinani, ivo vane akateedzana e nyika mabhenefiti uye mitengo yakasarudzika senge kutakura, tsika tsika, vashandi vepamba, fizi yekudzidzisa, ndege, pakati pevamwe.
Kubviswa kwemutero wemunhu mari.
Vanamai vanozvitonga kana vanoshanda vega uye vakanyoreswa muchirongwa chinoenderana cheSocial Security, vanogona kudzikiswa mari 1.200 euros pagore kumwana mumwe nemumwe ari pasi pemakore matatu ekuberekwa mune chirevo chemari yekuti akazvarwa kana kugamuchirwa mukati medunhu reSpain.
Iyo yekubereka kana yemubhadharo wababa, inova iyo yeupfumi kubatsirwa iyo inogamuchirwa kubva kuSocial Security kune mushandi.
Haisi chimwe chinhu kunze kwekubatsira kwekuramba uchigamuchira muhoro wakakodzera panguva yekuzorora kwekuzvarwa kwemwana.
Imwe nyaya yakakoshawo panguva yekuzvara inguva inoiswa kumwana kubva pakusununguka, nekuda kweizvi, vanaamai vanofanirwa kukumbira zororo rekusavapo kuva amai kwechinguva kuitira kuti nzvimbo yavo yebasa iremekedzwe uye vabhadharwe kwemavhiki ekuremara kwekubereka nekuchengeta vana.
Kunyangwe kutora nhumbu uchishanda mumakore apfuura kwakasarurwa zvakanyanya uye kunyangwe amai vakarasikirwa nebasa, nhasi zvakachengetedzwa chaizvo nemutemo uye tichatsanangura nyaya iyi zvakadzama pazasi.
Zororo rekuberekwa Icho chibatsiro chinopihwa neSocial Security iyo inoona kumiswa kwebasa rebasa revatete, kutorwa uye kusingaperi kana yakapusa pre-yekurera yekurera.
Kumiswa kwacho kunovhara nguva yemasvondo gumi nematanhatu ayo achanakidzwa zvisina kumiswa uye anowedzerwa nemamwe mavhiki maviri kubva kumwana wechipiri akazvarwa, muchiitiko chekuti kune kurapwa, kunowedzera nguva yainosvika kusvika kumavhiki gumi nematanhatu kana zvichidikanwa.
Kuti ukwanise kunakidzwa nerubatsiro urwu, unofanirwa kutevedzera zviviri zvakakosha zvinodiwa:
Iva mukati yakakwira muSocial Security: Kana amai vasina kunyoresa semunhu anoshandira kana anozvishandira, pane mamiriro ezvinhu apo izvi zvinogona zvakare kuzadzikiswa, sekushomeka kwemabasa kwese uko kupihwa rubatsiro rwekupa, kuendeswa kwemushandi nekambani iri kunze kwenzvimbo yenyika, pakati pemamwe mamiriro ezvinhu.
Kubvumidzwa a shoma mupiro nguva: kana mushandi ari pasi pemakore makumi maviri nerimwe ekuberekwa, haadi nguva yakaderera, zvisinei, kana asina zera iro, anofanira kunge ari pakati pemakore makumi maviri nemaviri nemakumi maviri nematanhatu uye ave nemupiro wemazuva makumi mapfumbamwe mukati memakore manomwe uye ave makore anodarika makumi maviri nematanhatu anofanira kubhadharwa mazuva zana nemakumi masere mumakore manomwe.
Kuti uzive kuti amai kana baba vachabhadharwa marii nekuda kwekumitiswa kwematernity, mubhadharo wemwedzi wapfuura unofanirwa kutorwa sereferenzi, kwaunogona kuona bhokisi rakanzi Zvakajairika, mune iyo mari inopatsanurwa nemazuva makumi matatu. yemwedzi uye chii chinoguma chaitika muhoro wezuva nezuva uchazobhadharwa. Yake inobatsira inobhadharwa neINSS.
Zororo rekuzvitakura rinotora vhiki gumi neshanu dzisingamiswe kunze kwekunge paine mamiriro asina kujairika senge anotevera mamiriro
Kubva pamwana wechipiri, vhiki mbiri dzekuremara dzinopihwa panguva yekuberekwa.
Kana ari mwana akaremara, anofanira kunge akaenzana kana kupfuura 33% kuitira kuti mamwe mavhiki maviri agone kupihwa mvumo yekuzvarwa.
Kana chiri chekuzvarwa nguva isati yakwana kana chero mamiriro ezvinhu anotendera kugara muchipatara kwenguva yakareba zvisinei nechikonzero. Kana kuiswa muchipatara kunotora anopfuura mazuva manomwe, amai vanogona kukumbira imwe nguva, iyo inogona kutovhara kusvika kumavhiki gumi nematatu zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Inogona zvakare kuwedzerwa kusvika kumavhiki gumi nematatu kana mwana achangoberekwa aine nguva refu yekurara kupfuura zvakajairwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Maternity rubatsiro kuSpain
Chii chinonzi mupiro wekuwedzera wepension?